Daawo: Sh Abyad: qaabkee loo dhaqaya qofka muslimka ah ee u dhinta Corona-virus - NorSom News
Daawo: Sh Abyad: qaabkee loo dhaqaya qofka muslimka ah ee u dhinta Corona-virus
Daaciga caanka ah ee soomaaliyeed, Sh Cabdiraxmaan Abyad oo kunool dalka Denmark, ayaa bartiisa Facebooga soo dhigay muuqaal uu dadka uga wacyigalinayo xanuunka Corona-virus, isaga oo ka digay in dadku aysan sahlan.
Wadaadka oo marka uu muuqaalka duubayo kasoo noqday aasitaanka qof muslim ah oo dalka Denmark ugu geeriyootay xanuunka Corona-virus, ayaa faah-faahin ka bixiyay qaabka ay tahay in loo dhaqo meydka qofka muslimka ah ee cudurkan sababsada.
Maalmahan waxaa dalalka Nordica ka socday been abuuro la xiriiro in masaajida muslimiintu ay diideen inay dhaqaan dadka xanuunkan u dhinta, cabsi ay xanuunka ka qabaan dartiis.
Halkan ka daawo muuqaalka Sh Cabdiraxmaan Abyad.
Si ay mar walba ula socoto wararka NorSom News oo maqal iyo muuqaal ah, halkan riix(Subcribe/Abonner).
Previous articleNorway: Dhimashada Corona-virus oo 14 gaartay maanta.
Next articleRagga ayaa ugu badan dadka u dhinta xanuunka Corona-virus.